Real Madrid Oo Guul Ka Gaartay Kooxda Getafe, Casemiro Iyo Vazquez Oo Shabaqa Soo Taabtay
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo guul ka gaartay kooxda Getafe, Casemiro iyo Vazquez oo Shabaqa soo taabtay
April 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Real Madrid ayaa guul ka gaadhay kooxda Getafe kulan ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu si ay u soo celiyaan 12 dhibcood oo ay ku hayaan hogaanka La Liga.
Real Madrid ayaa kusii siqaysa hanashada horyaalka LaLiga oo ay u muuqato in aanay cidina ka joojinayn xilli ciyaareedkan, waxaana iyadoo toddoba ciyaarood ka hadhsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedka ay hoggaanka ku haysaa 12 dhibcood oo u dhigma afar ciyaarood.
Los Blancos ayaa u baahan inay badiso afar ciyaarood oo kaliya si loogu caleemo-saaro horyaalka, waxaana koobka usii dhoweysay saddexda dhibcood ee ay ka heleen Getafe oo laba gool oo labadii qaybood ee ciyaarta ay u kala dhaliyeen Casemiro iyo Lucas Vazquez.
Daqiiqaddii 38aad ayay Real Madrid jabisay derbiga difaaca Getafe oo si adag isku ilaalinaysay, waxaana kubbad uu Vinicius Junior ka keenay dhinaca bidix madax ku qabtay Casemiro oo shabaqa ku hubsaday, halkaas ayaanay ka bilaabatantay guusha Real Madrid ee ciyaartani.
Kubbad ay isku soo dhiibeen Lucas Vazquez iyo Rodrygo oo dhinaca midig kasoo wada shaqeeyey, ayaa waxa xerada ganaaxa si xarrago leh iskugu dejiyey Vazquez oo lugta bidix si yar oo fudud ugu hubsaday goolka, waxaanu ciyaarta ka dhigay 2-0.
Dhamaadkii ayay Getafe birta u garaacday Real Madrid, waxaana baas dheer oo Djene uu usii daayey Raminez lugta gashay laacibka reer Turkey ee Unal oo isaguna goolka ku toogtay, isla markaana dhaafiyey goolhaye Courtois, hase yeeshee birta ayay kaga dhacday.
Kaddib guushan, Real Madrid waxay yeelatay 72 dhibcood, waxaana kusoo xigta Sevilla oo haysata 60 dhibcood, halka Barcelona oo saddexaad fadhida ay haysato 57 dhibcood, laakiin Barcelona waxay haysataa ciyaarteedii usbuucan oo ay Axadda dheelayso iyo kulan kale oo baaqi u ah.